Ukuphucula umgangatho wefoto nge Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuphucula umgangatho wefoto kunye ne-Photoshop
Ukuphucula umgangatho wefoto kunye ne-Photoshop Kuzo zonke ezo mifanekiso uziva uswele ubomi kunye nobukhali ngoncedo lwale nto inkqubo yokuhlela ifoto Uyakwazi ukuphucula zonke iifoto zakho ufumane iziphumo ezinomtsalane.
Sonke sinayo Iifoto ezindala ekhaya okanye iifoto ezithathwe ngekhamera embi, imifanekiso esiyithandayo kodwa ngenxa yezizathu ezithile ayinakubonwa kangako. Ngezixhobo ezimbalwa ze-Photoshop oya kuzifumana lungisa zonke iintlobo zeempazamo ehambelana nomgangatho obonakalayo wemifanekiso yakho. Inkumbulo elungileyo kufuneka ingafi ngendlela eyiyo.
Kuqhelekile ukudibana nezinye "bland" umfanekiso onokugcwaliswa okuncinci ngombala okanye umahluko omncinci kakhulu obangela ukuba imifanekiso ibe sisithunzela esimdaka kakhulu nesicaba, oku inokulungiswa ngotshintsho oluncinci kwiFotohop ngezixhobo ezilula kakhulu zokusebenzisa.
Phambi kokuba uqale ukwenza izindululo ezibonisiweyo kule post, kufuneka ubonakalise ukuba lonke utshintsho olwenziwe kwimifanekiso luyahluka ngokokuthanda kwakho, kuxhomekeke kumntu obuyisa imifanekiso uya kwenza utshintsho oluthile okanye abanye.
1 Ukuqaqamba nokungafani
2 Ubungakanani bombala
3 Ibhalansi yombala
4 Ukulungiswa kombala okhethiweyo
Into yokuqala esiya kuyo ukulungisa yomfanekiso wethu ngu ngokwahlukileyo ngenjongo yokufezekisa umfanekiso onamandla ngakumbi okubonakalayo kunye nokwahlula phakathi kwawo onke amalungu. Ukwenza oku kuya kufuneka senze ifayile umahluko wolungelelwaniso, Esi sixhobo sisezantsi emazantsi. Ngolu luhlu lohlengahlengiso sinako tshintsha umahluko womfanekiso wethu ukuthanda kwethu.
IPodemos yandisa ubungakanani bombala womfanekiso kuyilwa uhlengahlengiso lobungakanani, Olu luhlu lolungelelwaniso alusivumeli kuphela yandisa ukwanda kwemibala kodwa kwakhona ukunciphisa. Ukuba ifoto yethu indala, kuluncedo ukuyiguqula le nxalenye Photoshop.
Ukuba sifuna yenza umoya obandayo okanye ofudumeleyo podemos lungisa ukulinganisela kombala womfanekiso nge ulungelelwaniso lolungelelwaniso lombala. Olu khetho lukhuthazwa kakhulu umbala ochanekileyoUmzekelo, ukuba umfanekiso wethu unethoni eluhlaza okwesibhakabhaka, sinokuwutshintsha loo mbala ubalasele owahlukileyo.
Ukulungiswa kombala okhethiweyo
Ukuba sifuna ukwenza ifayile ye- ukulungiswa kombala ngokuthe ngqo singayenza nge isixhobo sokulungisa esikhethiweyo. Olu luhlu lolungelelwaniso luyasivumela lungisa imibala echanekileyo ngokuchanekileyo kwaye iyakwazi yenza ukhetho lweendawo ezithile zomfanekiso kunye nokuguqula imibala ngolu khetho. Olunye uhlobo olulungileyo ukuba sijonge iziphumo zobungcali apho iinkcukacha zibaluleke kakhulu.
Photoshop Luncedo olukhulu kubo bonke abo bathandi okanye hayi ukufota abafuna ukungafezeki kwamaxesha kweyona ndlela ichanekileyo. Ngendlela elula kakhulu uya kuba neenkumbulo ezifotayo zomgangatho ophezulu kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Ukuphucula umgangatho wefoto kunye ne-Photoshop